रुकुम पश्चिम सानिभेरि गाउँपालिकामा नयाँ थप १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि – Paluwa Khabar
रुकुम पश्चिम सानिभेरि गाउँपालिकामा नयाँ थप १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
अषोज २५, २०७७ आइतबार 18
रुकुम पश्चिम असोज २५ गोपाल सिंह खड्का
रुकुम पश्चिमको सानिभेरी गाउँपालिकामा आज एकैदिन १० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमन पुष्टि भएको छ । आरटी पिसिआर प्रयोगशाला चौरजहारीमा ७२ जनाको स्वाबको नुमना परिक्षण गर्दा १० जनामा संक्रमन देखिएको हो ।
यही २२ गत्ते संकलन गरिएका स्वाबको नमुना परिक्षण गर्दा ८ जना पुरुष र २ महिलाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सानिभेरी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा सँयोजक छविलाल केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँ संक्रमितहरु वडा नम्बर ४ का दुई महिला र तिन पुरुष रहेका छन । यस्तै वडा नम्बर ३ का तिन जना पुरुष, वडा नम्बर ९ का २ जना पुरुषमा भाइरस संक्रमन पाइएको हो ।
२३ वर्ष देखी ५० वर्ष सम्म उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई कोरोना देखिएको स्वास्थ्य सँयोजक केसीले बताउनुभयो । संक्रमित मध्ये ९ जना भारतबाट आएका हुन भने १ जना नेपालगञ्जबाट आएका हुन । करिव १० दिन अघी भारतबाट आई होम क्वारेन्टीमा बसेकाहरुलाई संक्रमन देखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
यस सँगै सानिभेरी गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या २० पगेको छ ति मध्ये १५ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन । यसअघी संक्रमित भै आइसोलेसनमा बसेका ५ जनाको दोस्रो पटकको कोरोना रिपोर्ट पनि पोजेटिभ नै आएको बताइएको छ । जिल्लाभर कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय ४३ पुगेको छ ।।
Prevब्यथा भित्रकाे कथा
Nextकंचनपुरमा मृत अवस्थामा दुई ब्यक्ति फेला
नेकपा वैधानिक रुपमा फुट्ला कि जुट्ला ? यस्तो छ आन्तरिक रहस्य?
एका एक प्रचण्डको अडियो काण्ड सार्वजनिक देश भर आलोचना ( सुन्नुहोस् पुरा अडियो)
स्त’ न आ’ कर्षक बनाउन यु’ वतीहरु यस्तो तरिका अपनाउँछन् (हेर्नुहोस् भिडियो)